အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ပြထားတဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ ဂွတ်ရှယ်ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ် ကောက် ကြောင်း နဲ့ ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှနေတဲ့ သူ လေး က တော့ ပုရိသတို့ အသည်း စွဲ ခေးကြီး လုလုအောင် ပါ နော် … ။ သူမဟာ single mother တစ် ယောက် အနေ နဲ့ လည်း အောင်မြင် စွာ ရပ်တည် နေနိုင်တဲ့ သူ ဖြစ် ပြီး တစ်နေ့ တခြား လည်း လှသွေး ကြွယ် နေတဲ့ သူလေး ဖြစ် ပါ တယ် … ။ လုလုအောင် ဟာ အမြဲ တန်း တက်ကြွ နေ လေ့ ရှိ ပြီး အနု ပညာ လှုပ်ရှား မှု အနေနဲ့ ကြော်ငြာ များ လည်း ရိုက်ကူး အောင် မြင် နေပြီ ဖြစ် ပါ တယ် … ။
လုလုအောင် ဟာ သူမ ရဲ့ သမီးလေး နဲ့ အတူ အချိန် ပေးပြီး ပျော်ရွှင် စွာ နေထိုင် တတ် တဲ့သူ လည်း ဖြစ် တာ ကြောင့် ပရိတ် သတ် တွေ က သူမ ကို ပိုပြီး ချစ်ခင် အားပေး နေ ကြ တာ ပါ နော် … ။ အခု လတ် တလော မှာ ဆိုရင် လည်း လုလုအောင် ဟာ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ကို ရံဖန် ရံခါ မှ သာ တင် ပေးလေ့ ရှိနေ တာဖြစ် ပါ တယ် နော် … ။
ပုံ တွေ သိပ် တင်လေ့ မ ရှိ တဲ့ လုဟာ တင် လိုက် တိုင်း လည်း အမိုက် စား ပုံ လေးတွေ ပဲ တင် တတ် တာကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ မှုကို ရရှိ နေ တာ ပါ … ။ မကြာသေး မီ က လည်း သူမရဲ့ Facebook စာမျက် နှာ မှာ “အပြင်မာ ကျား ကြီး ရှိ တယ် ဆိုပီး မထွက် ရဲ ခဲ့တာ … ထွက်ကြည့် လိုက် တာ ခွေး က လေး ဖစ်နေတယ် … ” ဆို တဲ့ caption လေး နဲ့ ခပ် မိုက်မိုက် ပုံ လေး တွေ တင်ပေး လာ ပါ တယ်..။ ကဲ … ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ လွေနတဲ့ သူ ေလး က ေတာ့ ပုရိသတို႔ အသည္း စြဲ ေခးႀကီး လုလုေအာင္ ပါ ေနာ္ … ။ သူမဟာ single mother တစ္ ေယာက္ အေန နဲ႔ လည္း ေအာင္ျမင္ စြာ ရပ္တည္ ေနနိုင္တဲ့ သူ ျဖစ္ ၿပီး တစ္ေန႔ တျခား လည္း လွေသြး ႂကြယ္ ေနတဲ့ သူေလး ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ လုလုေအာင္ ဟာ အျမဲ တန္း တက္ႂကြ ေန ေလ့ ရွိ ၿပီး အႏု ပညာ လႈပ္ရွား မႈ အေနနဲ႔ ေၾကာ္ျငာ မ်ား လည္း ရိုက္ကူး ေအာင္ ျမင္ ေနၿပီ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
လုလုေအာင္ ဟာ သူမ ရဲ့ သမီးေလး နဲ႔ အတူ အခ်ိန္ ေပးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ေနထိုင္ တတ္ တဲ့သူ လည္း ျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ ပရိတ္ သတ္ ေတြ က သူမ ကို ပိုၿပီး ခ်စ္ခင္ အားေပး ေန ၾက တာ ပါ ေနာ္ … ။ အခု လတ္ တေလာ မွာ ဆိုရင္ လည္း လုလုေအာင္ ဟာ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို ရံဖန္ ရံခါ မွ သာ တင္ ေပးေလ့ ရွိေန တာျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … ။
ပုံ ေတြ သိပ္ တင္ေလ့ မ ရွိ တဲ့ လုဟာ တင္ လိုက္ တိုင္း လည္း အမိုက္ စား ပုံ ေလးေတြ ပဲ တင္ တတ္ တာေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံ မႈကို ရရွိ ေန တာ ပါ … ။ မၾကာေသး မီ က လည္း သူမရဲ့ Facebook စာမ်က္ ႏွာ မွာ “အျပင္မာ က်ား ႀကီး ရွိ တယ္ ဆိုပီး မထြက္ ရဲ ခဲ့တာ … ထြက္ၾကည့္ လိုက္ တာ ေခြး က ေလး ဖစ္ေနတယ္ … ” ဆို တဲ့ caption ေလး နဲ႔ ခပ္ မိုက္မိုက္ ပုံ ေလး ေတြ တင္ေပး လာ ပါ တယ္..။ ကဲ … ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွ ေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို တွန့်လိမ်ပြီး အမိုက်စားကကွက်လေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
Next post ပုရိသတို့ရဲ့ရင်ကို ထိမိစေမယ့် ကောက်ကြောင်းအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် အမိုက်စားပို့စ်လေးတွေပေးနေတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်